၁၉၉၇၊ ဖေဖော်ဝါရီလက မြန်မာပြည်၊ ထားဝယ်ဒေသ၌ နေထိုင်နေသည့် ဘာသာရေးကို နှစ်နှစ်ကာကာယုံကြည်ကြသည့် ကရင် ခရိယာန်မိသားစု (၂၀ဝ) ခန့်သည် ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ နေထိုင်လာခဲ့သည့် ၎င်းတို့၏ရွာများမှ စွန့်ခွာရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီး ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ၁၉၉၇၊ မတ်လ (၇) ရက်နေ့တွင် ကရင်တရားဟောဆရာ သာပီး က ဘုရားသခင်တပ်မတော်ကို မြန်မာပြည်နယ်စပ်၌ တည်ထောင်ခဲ့သည်။ “သူတို့ထွက်ပြေးလာခဲ့တဲ့အကြောင်းကတော့ ဗမာပြည်မှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ နအဖ က ညှင်းပမ်း နှိပ်စက်လို့ပဲ” ဟု အသက် (၅၅) နှစ်ရွယ် ပဒိုကွယ်ထူးဝင်း ကပြောပြသည်။ ပဒိုကွယ်ထူးဝင်းမှာ အစိုးရအားဆန့်ကျင်တော်လှန်နေသည့် KNU ၏ ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ပြီး ၁၉၉၁ မှစ၍ ဘိတ်-ထားဝယ် ခရိုင်၏ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူနေသူဖြစ်သည်။
ရတ်ချ်ဘူရီအရေးအခင်အပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ဘုရားသခင်တပ်မတော်မှ စစ်သည်များသည် ဂျော်နီ(ကြီး)အပေါ် စိတ်ပျက်လာကြသည်။ နောက်ဆုံး၌ အမွှာညီအစ်ကိုသည် စွမ်းအားမြှင့်အား ထောက်ခံနေမှုကို ရုပ်သိမ်းလိုက်တော့သည်။ ဂျော်နီ(ကြီး)နှင့်အမြဲတွဲနေသည့် ဂျော်နီထူးသည်ပင်လျှင် ဂျော်နီ(ကြီး)အား ဆန့်ကျင်လာသည်။ ဘုရားသခင် တပ်မတော်သည် KNU စကားကို နားထောင်စပြုလာသည်။ သို့သော်အလွန်နောက်ကျနေပေပြီ။ အမှားများလုပ်ပြီးကုန်ပေပြီ။ အမွှာညီအစ်ကိုက ထိုင်းသတင်းစာခေါင်းကြီးပိုင်းတွင် ၎င်းတို့အား မည်သူမျှမကူညီကြဟု ပြောဆိုနေပေပြီ။ သတင်းစာက “သူတို့ကို ဘာသာရေးတယူသန်အုပ်စုအနေနဲ့ လူတွေသိအောင် ဖော်ပြတာ ဖြစ်တယ်” ဟု ကွယ်ထူး က ပြောပြသည်။
ဘုရားသခင်တပ်မတော်တွင်ပါဝင်ခဲ့ကြသူများသည် မတူသည့်လမ်းအသီးသီးဆီသို့ ထွက်ခွာသွားကြပေပြီ။ ယခင် အတွင်းရေးမှူချုပ်ဖြစ်သူ စောတိုးတိုးနှင့်အခြားသူများသည် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ခိုလှုံခွင့်ရခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ကရင်ဒေသခံအများစုမှာတော့ ကံမကောင်းချေ။ နအဖ ထိုးစစ်များ ပြင်းထန်လာပြီးနောက်ပိုင်း ၂၀ဝ၀ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ရက်နှင့် ၃ရက်နေ့တွင် ဘုရားသခင် တပ်မတော်မှ စစ်သည်များ နှင့်ဆွေမျိုးများသည် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာကာ ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် လမ်းဆုံးခဲ့ကြပေတော့သည်။ ထိုင်း အာဏာပိုင်များကလည်း ၎င်းတို့၏ ဆွေမျိုးများကို တကိုးလန်းရွာမှ နှင်ထုတ်လိုက်ကြပြီး ဒုက္ခသည်စခန်းများသို့ပို့ပစ်ကာ ဘုရားသခင် တပ်မတော်အား လက်စားချေကြသည်။
စွမ်းအားမြှင့်တပ်မှူး ရဲသီဟ ကား ပို၍ ကံကောင်းသည်။ ၎င်းအားဖမ်းဆီးရန် ၎င်းနေထိုင်သည့် ဘန်ကောက်ရှိ တိုက်ခန်းအပြင်ဘက်၌ ရဲတပ်ဖွဲ့ကစောင့်ဆိုင်းနေစဉ် ရဲတပ်ဖွဲ့ထံသို့ဖုန်းဖြင့် အမိန့်တခု ဝင်ရောက်လာသည်။ ၎င်းမှာ ရဲသီဟသည် နိုင်ငံခြားထောက်လှမ်းရေး အေဂျင်စီတခုအတွက် အလုပ်လုပ်နေသူဖြစ်ကြောင်း ဤအကြံပြုချက်အား ယုံကြည်လက်ခံပြီး ၎င်းအားဖမ်းဆီးမည့် စစ်ဆင်ရေးကို ဖျက် သိမ်းရန်ပင် ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်သစ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် ကမ်းလှမ်းခံရပြီးနောက်ပိုင်း၊ ၂၀ဝ၃ ဩဂုတ်လ၌ ရွှေဗျား သည် နအဖ ထံသို့ လက်နက်ချခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တဦးမှတဆင့် အမွှာညီအစ်ကိုဆီသို့ ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး နအဖ ထံ လက်နက်ချပါက အထူးအခွင့်အရေးများပေးမည် ဖြစ်ကြောင်းဆွဲဆောင်စည်းရုံးခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး ၂၀ဝ၆ ဇူလိုင်လတွင် ဂျော်နီသည် သူ၏ဖခင်နှင့် အခြား အဖွဲ့ဝင်အချို့နှင့်အတူလက်နက်ချခဲ့သည်။ ၂၀ဝ၆၊ ဇူလိုင် ၂၆ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် စစ်ယူနီဖောင်းများဝင်ဆင်ထား သည့် စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်နေသည့် မျက်နှာများဖြင့် လူ(၁၀) ဦး၏ ဓာတ်ပုံနှင့်တကွ ၎င်းတို့၏လက်နက်ချသတင်းကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဓာတ်ပုံထဲတွင် ဂျော်နီထူးသည် လက်နက်ခဲယမ်းများစီထားသည့်အတန်း၏နောက်တွင် ရပ်နေသည်။ တဖက်နိုင်ငံတွင်အခြေစိုက်ထားသည့် ဘုရားသခင်တပ်မတော်မှ ဂျော်နီထူးခေါင်းဆောင်သည့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင် (၉) ဦး၊ တရားဥပေဒေဘောင်အတွင်းသို့ ပြန်လည် ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီဟု သတင်းကဖော်ပြထားသည်။
ဂျော်နီလက်နက်ချပြီးနောက် လူသာထူးသည် ၎င်း၏ အကိုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအခြေအနေသိရန် ကြိုးစားနေသည့်ကွယ်ထူးနှင့် ဆက်သွယ်ခဲ့ သည်။ ဂျော်နီနှင့်ဆက်သွယ်ရန် ကြိမ်ဖန်များစွာကြိုးစားခဲ့သော်လည်း အဆက်အသွယ်မရကြောင်း ကွယ်ထူးက ပြောပြသည်။ မကြာသေး မီက လူသာသည် ၎င်းအစ်ကိုထံမှ သတင်းတခုရခဲ့သည်မှာ “တကယ်လို့ တယောက်ယောက်က မင်းဆီကို လက်နက်ချဖို့လာပြီး စည်းရုံး တယ်ဆိုရင် သူ့ကို သတ်ပစ်လိုက်ပါ။ ဘယ်တော့မှ မယုံပါနဲ့” ဟု ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ ခိုင်လုံသောသတင်းရပ်ကွက်အဆိုအရ ဂျော်နီသည် ထားဝယ်အရှေ့ဘက်ရှိ မေတ္တာမြို့တွင် ၎င်း၏ဇနီးနှင့်အတူ နေထိုင်လျက် ရှိသည်။
ဇာခန်းဆီး နောက်ကွယ်က သစ္စာဖောက်မှုလေလား?[ပြင်ဆင်ရန်]
သို့သော် လုံခြုံရေးသတင်းရပ်ကွက်အဆိုအရဆိုလျှင် ဘန်ကောက်ရှိ အထူးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် နိုင်ငံခြားအဖွဲ့တခုက မြန်မာသံရုံး စီနင်းမှုမှ အတော်ပင်အကျိုးအမြတ်ရရှိခဲ့သည်။ သံရုံး စတင်စီးနင်းပြီးနောက်မကြာမီအတွင်းမှာပင် ဆာ့ထုံးလမ်းမကြီးပေါ်ရှိမြန်မာသံရုံးမှ ထွက်ခွာလာသည့် ဗင်ကား (၃) စီးအနက်မှ (၁) စီးသည် အနီးရှိအခြားသံရုံးဝင်းအတွင်းသို့ ဝင်သွားခဲ့သည်။ ထိုကားပေါ်တွင် အမှိုက်ထည့် သည့် အိတ်ကြီးများဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသည့်စာရွက်စာတမ်း အမြောက်အမြား ပါသွားခဲ့သည်ဟု ထိုသတင်းရပ်ကွက်က ပြောဆိုသည်။ မြန်မာ သံအမတ်ကြီးရုံးခန်းအတွင်းရှိ စာရွက်စာတန်းများထားသည့်အလုံခန်းမှ မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်ဖေါက်ကားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းပေးများ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း အထောက်အထားများအပါအဝင် လျှို့ဝှက်စာရွက်စာတန်းအမြောက်အမြားကို သယ်ထုတ်ရန် စွမ်းအားမြှင့်အဖွဲ့က တနည်းနည်းဖြင့် တာဝန်ယူစီမံလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု ထိုသတင်းရပ်ကွက်ကပင် ပြောဆိုသည်။
နောက်ပိုင်း ရက်အနည်းငယ်အကြာ၌ ပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချရသောနေရာသို့ရုံးပြောင်းရန် ၎င်းအား အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ သူ့ အနေဖြင့် ထိုသို့လုပ်ရန် ဝန်လေးနေသည်။ ရွှေ့ပြောင်းနေစဉ်အတွင်းမှာပင် ကွန်ပြူတာသယ်နေစဉ် ရုတ်တရက်လဲကျသွားသည်။ ဘန်ကောက်တွင်ပြုလုပ်သည့် သူ၏အသုဘအခမ်းအနား၌ လာရောက်ပို့ဆောင်သည့် လွမ်းသူ့ပန်းခွေများထားရာနေရာသို့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြင့် လူတယောက် ပန်းခွေ တခွေ လာချသွားပြီး၊ ရုတ်ခြည်းပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ပန်းခွေပေါ်တွင် “VBSW” ဟု အတိုကောက်ရေးထားသည်။ ထိုစာတန်းကို အသုဘပို့သူရာနှင့်ချီသည့် လူအုပ်ထဲမှ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပင် မြင်တွေ့နိုင်ပေသည်။ ထိုအထဲတွင် အသုဘပို့ဆောင်သည့် လူအုပ်ကြီးအား ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းဖြင့်အလုပ်ရှုပ်နေသည့် မြန်မာစကားမတောက်တခေါက်ပြောဆိုနေသည့် ထောက်လှမ်းရေးများပါဝင်ပေသည်။
 Archived 27 March 2009 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘုရားသခင်တပ်မတော်&oldid=719103" မှ ရယူရန်